Isiphequluli seTor: Kubuyekezelwe kunguqulo ezinzile 8.0.3 | Kusuka kuLinux
Isiphequluli se-Tor: Isibhengezo esidalwe yi-DeviantArt
Kusukela okokugcina lapho sikhulume ngqo ngeTor Browser kuLinux, ezincwadini ezedlule ezibiziwe «Isixha se-Tor Browser noma ukuthi ungaphequlula kanjani ngokungaziwa» kusuka ngo-2012 no «Ungayifunda kanjani i-Shell Scripting ngokufaka i-Tor Browser? we-2016Kube yilokhu okuguquke lolu hlelo lokusebenza, ikakhulukazi ngoba izibuyekezo eziningi ze-Firefox zifika ngokushesha okukhulu futhi lokho kuyisisekelo sokuthuthukiswa kweTor Browser.
Okwamanje, isiphequluli seTor sibuyekezelwe enguqulweni ezinzile # 8.0.3 nenguqulo engazinzile # 8.5a4 ngokususelwa ngokulandelana kuzinguqulo zeFirefox 60.3.0esr. Okungukuletha ukuthuthukiswa kwesiphequluli seT Tor eduze kakhulu kokuhle kakhulu iFirefox engakunikeza njengamanje ngaphandle kwezinguquko ezinkulu.
3.1 I-Paso 1
3.2 I-Paso 2
3.3 I-Paso 3
Kulabo abangasebenzisi noma abangazi lutho ngalokho i-Tor Browser eyiyo, sizocacisa kafushane ukuthi yi-Web Browser kanye ne-multiplatform application (Windows / GNU-Linux) lokho kwenza kube lula ngathi ukufihla kanye / noma ukufihla ubunikazi bethu kunethiwekhi.
Ukusinikeza umzila ongaziwa ngamaseva we-proxy okwenza ukuxhumana kwethu kwewebhu kube nzima ukulandela ngomkhondo ngokufanele ukugwema ukuhlaziywa kwethrafikhi kwangaphandle.
Ukuze, usebenzisa i-Tor Browser Web Browser kungenzeka ukuthi wenze ukuxhumana nomgcini, cishe ngokungabonakali, okungukuthi, ngaphandle kwalokhu noma omunye umuntu onethuba lokwazi i-IP yethu.
Impela bonke ubuchwepheshe besiphequluli se-Tor bungasetshenziswa ngokwehlukile ku-Operating System ye-GNU / Linux, ngomphathi wezithombe obizwa ngeVidalia kwisiphequluli se-Intanethi esihambisanayo (njengeMozilla Firefox) esineTorbutton (Add-on / Plugin) esivumela ukuthi siyisebenzise kusuka kwisiphequluli uqobo.
Kodwa-ke, kusiphequluli sewebhu seTor Browser, abadali bayo bakwazile ukwenza lula konke, baklama uhlelo lokusebenza oluqinile futhi oluqinile (iphakethe) ngendlela ebanzi, okungukuthi, ngakho konke okudingayo ukuze usebenze ngokushesha kunoma ikuphi ukusatshalaliswa.
Y usebenzisa izinguqulo zakamuva nezihamba phambili zeMozilla FirefoxUkuze usebenzise ngokunenzuzo izinsiza zobuchwepheshe zezinye zeziphequluli ezingcono kakhulu zeWebhu kuFree World.
I-Tor Browser kulula kakhulu ukuyisebenzisa, uma ifakiwe futhi isebenza kuncane noma akukho okulungiselelwe, ngaphandle kokuthi ungumsebenzisi othuthuke kakhulu noma i-paranoid mayelana nokuphepha nobumfihlo. I-Tor Browser 8.0.3 isiyatholakala ekhasini le-Tor Browser Project kanye nasenkombeni yethu yokusabalalisa.
Le nguqulo yeTor Browser 8.0.3 yethula izibuyekezo ezibalulekile zokuphepha zeFirefox, kufaka phakathi:
Ukufakwa kwezinguqulo zakamuva zeNoScript ne-HTTPS Yonke indawo.
Isibhengezo seminikelo sifakiwe emkhankasweni wokuphela konyaka.
Iphakheji yokulungiswa okuncane kwezinkinga ezitholwe kulo ku-GNU / Linux.
Ukushintshwa kwe-API entsha yokuxhumana neNoScript <-> Torbutton.
Ezingeni lomhlaba jikelele, okungukuthi, kwi-Browser kuwo wonke amapulatifomu asetshenzisiwe, izinguquko kusukela ku-Tor Browser 8.0.2 zifaka:
Vuselela kwisisekelo seFirefox ku-60.3.0esr
Isibuyekezo seTorbutton enguqulweni # 2.0.8
Ukufakwa kwe-Donation Banner yokuphela konyaka womkhankaso we-2018.
Lungisa i-Bug # 24172: Ihlobene nesibhengezo somnikelo ne-Tor version.
Lungisa i-Bug # 27760: Okuhlobene nokusetshenziswa kwe-NoScript API entsha ye-IPC.
Ukuvuselelwa kokuhunyushwa okutholakalayo.
Ukuvuselelwa kwe-HTTPS Yonke indawo kunguqulo # 2018.9.19
Ukuvuselelwa kwe-NoScript kunguqulo # 10.1.9.9
Ezingeni elithile le-Browser kuma-platforms we-GNU / Linux, ushintsho olusetshenziswe kusuka enguqulweni yeTor Browser 8.0.2 kuya kule yamanje luyi:
Lungisa i-Bug # 27546: Lokho kulungisa indlela yokuziphatha yokuma mpo ku-Tor Browser 8 ene-Gtk3.
Lungisa i-Bug # 27552: Ukwenza ngcono ukusetshenziswa kwesikhombi kufakwe ku-CentOS / RHEL 6.
Okwamanje ukufaka i-Tor Browser Browser ku-GNU / Linux Operating Systems kulula kakhulu, esizoyifaka imininingwane ngezansi, kepha uma ufuna usizo oluthuthuke kakhulu, khumbula ukufunda okuthunyelwe kwangaphambilini okunconyiwe.
Njenge: «Isixha se-Tor Browser noma ukuthi ungaphequlula kanjani ngokungaziwa» kusuka ngo-2012 no "Ungayifunda kanjani iShell Scripting ngokufaka iTr Browser?"2016 noma ezinye ukuze uncike kuzo kuleso sici.
Landa i-Official Website Navigator ye Inhlangano yeProjekthi yeTor, kungaba kunkinobho eboniswa ekhasini lasekhaya noma ngqo esigabeni se- «Ukulanda Okulula», noma isigaba se «Ukulanda Okuvamile» noma isigaba se "Ukulanda okuqondile".
Vula ifayili elizoba yifomethi ye-tar.xz yama-Platform angama-64 bit we-GNU / Linux ngeSpanish enguqulweni yamanje izobizwa "Isiphequluli se-Tor-linux64-8.0.3_es-EN.tar.xz". Ngemuva kokuvula uziphu sonke isiphequluli sewebhu izobe isilungele ukusebenzisa ngaphakathi kwefolda ebizwa "Isiphequluli se-Tor -es-ES".
Qalisa ifayela elibizwa nge- "Tor Browser Setup" futhi ungaqala ukusebenzisa i-Tor Browser Browser ngaphandle kwezinkinga. Setha ngokulandela izincomo osuvele wazi noma unconywe ngochwepheshe be-Intanethi.
Lokhu konke kulokhu okuthunyelwe, ngithemba ukuthi uyayifaka futhi uyayithanda iTr Browser!
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isiphequluli seTor: Kubuyekezelwe kunguqulo ezinzile engu-8.0.3
I-athikili ephelele kakhulu njengoba bekulindelwe kumhleli oyingcweti emkhakheni wesayensi yamakhompiyutha futhi onguchwepheshe wesoftware yamahhala, asihambe
UGabriel Cardenas O. kusho
Sawubona, futhi ngiyabonga ngomnikelo; kepha nginombuzo:
Ngaphakathi komzila wokuxhuma, kungenzeka yini ukwabela izwe elithile njengendawo yokuphuma?
Ngikufakazela lokhu ngoba lapho ngihamba, futhi ngifuna ukufaka i-akhawunti ye-imeyili, ngokwesibonelo, lapho ngikhomba kusuka ku- "IP" kwenye indawo, kucatshangwa ukuthi kungaba khona ukungena, bese kuqala amasheke wamacala. Ukungakhulumi nge-akhawunti yasebhange, njengoba kunzima kakhulu uma ukhohliwe ukwazisa inkampani ngohambo. Ngiyabonga
Phendula uGabriel Cárdenas O.
Ngalokho, kungenzeka ufake i-plugin esipheqululini esetha ikheli le-IP ngaphakathi kwezwe ofuna ukulingisa kulo ithrafikhi.
Noma ungahlela ifayela le-torrc ukuphoqa amakheli we-IP wezwe eliqediwe.
Isibonelo: Sudo nano / etc / tor / torrc
Futhi ungeza ekugcineni kwefayela imigqa:
Gcina bese usebenzisa iTor-browser.
Kulesi sibonelo esikwenzile ukuphoqa isiphequluli ukuthi sithole i-IP ezweni esithandayo. Kulokhu iSpain (ES), kepha kungaba yi-Argetina (AR), iPeru (PE), iVenezuela (VE) noma yini esiyifunayo.
Ungahlola ngokufaka http://www.ip-adress.com/ futhi ngalokho wazi ukuthi konke kusebenza kahle nge-IP yakho yasendaweni eyenziwe.
I-RISC OS: isistimu yokusebenza ye-retro ye-Raspberry Pi